Abuuri Google mabaadi'yo Earth oo leh AutoCAD - Geofumed
Disember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Featured, Google Earth / Maps, topografia
Waqti hore ka hor ayaan ka hadlay Plex.Earth Tools for AutoCAD, qalab xiiso leh oo ka baxsan soo dejinta, abuuraan masaajo sawirada jajaban iyo si sax ah u tiri, waxaad kaloo samayn kartaa jadwal dhowr ah oo ka jira aagga sahan. Wakhtigan waxaan rabaa in aan tuso jiilalka ka hadlaya Google Earth.
Waxaa laga yaabaa in xaqiiqda ah in ay dhiseen by Engineer Madani ah oo ku lug leh tiknoolajiyada, Plex.Earth waxay sameeyaan oo kaliya waxa dadka isticmaala farsamada ay ka filayaan Google Earth oo ka yimid dhinaca AutoCAD, iyada oo taageero ka heleysa in ka badan nidaamyada isku xirka 2,000.
Waa maxay version of AutoCAD
Plex.Earth waxay ka shaqeysaa version AutoCAD 2007 illaa AutoCAD 2012, 32 iyo 64 labadaba.
Mid ka mid ah waxyaaba xiisaha leh ayaa ah in aysan jirin wax xaddidan oo ah inaad noqoto mid asaasi ah, Isbedelka 'CivilCAD' taas oo buuxisa qayb buuxda. Inkasta oo aan caddaynayo, in CivilCAD ay abuuri karto goobo laakiin maaha soo dejinta muuqaalka jajaban ama qaabka dijital ah ee Google Earth.
Siyaabaha soo dejinta qodobbada
Waxaad leedahay ugu yaraan 4 siyaabaha soo dejinta dhibcooyinka:
Laga soo bilaabo shabaqa (on Grid): Tani waa, kaliya waa lagama maarmaan in la tilmaamo laba dhibcood ee sawirka, dhamaadka leydi. Faa'iidada ugu weyn ee kiiskani waa in xadhigga loo rogi doono si toos ah khadka.
Iyada oo meel lagu qeexay (Area On): Waayo, kan, waxaan xushay polyline ah AutoCAD, iyadoo aan loo eegayn sida, waxa laga saari doonaa iyo xirneeyn orthogonal woqooyi / koonfurta juqraafi.
Laga soo bilaabo aragtida hadda (Laga soo bilaabo View View): Tani waxay keeni doontaa sanduuqa oo dhan aragtidayada ee AutoCAD
Laga soo bilaabo aagaha lagu qeexay Google Earth: waxa la mid ah kan labaad, oo leh farqiga aagga lagu qeexay geynta Google Earth
Marka shuruudaha la cayimay, waxaad isticmaali kartaa warqadda S (Settings) ama badhanka midig si aad u doorato nooca walxaha aynu fileyno in aan soo dejinno:
Curves si toos ah
Tusaalaha dijital ah sida dusha sare
Ka dibna waxaanu tusinaa inta qofkeennu rabno caqiidada, ka hor intaanan sameynin in uu na weydiisto haddii aan amaan nahay. Way cadahay, qaddar aad u ballaaran waxay qaadan kartaa aduunka, laakiin tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan, oo kugu haboon waxa Microstation isku dayayo inuu sameeyo iyo Civil3D halkaas oo muuqaalku ku yimaado madow iyo caddaan iyo iyada oo aan sax aheyn.
Marka xigta, waxaanu tusinaa sida ugu badan ee aan u rabno curyaamiinta waaweyn iyo kuwa labaad. Sidoo kale waxa lakabyada aan sugeyno walxaha.
Midabada curfadu waxay ku xiran tahay lakabka, eeg sida looxa loo soo saaro iyadoo la adeegsanayo shabakadda ama meesha la qeexay sida xuduudaha.
Xogta gudaha waxaa lagu dari karaa sahammo sahlan, marka laga reebo abuurista wareegyada iyo dusha sare, waxaad sidoo kale xisaabin kartaa kala duwanaanta mugga u dhexeeya laba dusha ama dusha sare.
Fikradayda, codsiga ugu fiican ee loogu talagalay AutoCAD ee dhab ahaantii la xiriirta Google Earth, si fudud ayaa uga baxa codsiyada xafaayadda sida ContouringGE taas oo lafteedu ay ku adkaatay rakibidda. Maalgashiga wanaagsan ee soo saara, haddii baaxaddeenna ay tahay taallo dusha ama qaabaynta.
Plex.Earth waxay noqon kartaa download bilaash ah, xilliga tijaabada ee maalmaha 15.
Post Previous«Previous 5 2013 qaababka cusub ee AutoCAD
6 Jawaab in ay "Abuuraan Google Earth Contors with AutoCAD"
guettaouiaz isagu wuxuu leeyahay:
Juan Lopez Jimenez isagu wuxuu leeyahay:
Tusmada bidix waxaa ku yaal sanduuqa wada hadalka oo aad ku qorto ereyga 'conours' sidaas darteed waxaad lahaan doontaa qodobbada la xiriira mawduuca. Sidoo kale kor, qaybta sare ee waxaad ka raadin kartaa «dhammaan waxyaabaha ku saabsan sawir-gacmeedka” waxaa jira mowduucyo badan oo ku taxan.
WAA INAAN OGAADAA HADDII AAD I SIIN KARSATO CARUURTA LEVEL EE KU SAABSAN WAAN ING. MUUQAALKA ANIGU WAXAAN KU SAMEEYAA MAGACA DHAQANKA
Manuel Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
bogga aadka u fiican, waxaan runtii u adeegay talooyin badan oo halkan lagu siiyay. Anigu waxaan ahay rayid iyo ka hor inta aan isticmaalin mashiinka dhulka ee autodesk. Xilligan waxaan bilaabay inaan barto nafsad ahaanshaha 3D 2012 iyo waxoogaa yar waxoogaa yar ayaan fahamsanahaya in kastoo aan maqanahay, wax badan. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay heystaan ​​macluumaad ku saabsan sida loo xisaabiyo darajooyinka muuqaalka ah, illaa iyo hadda waxaan u imid inaan abuuro dusha sare, profiles iyo qaybo kala duwan.